Jiro jiro - inona no firavaka amin'izao fotoana izao?
Fashion Jewelery - Trends and New Directions
Ny fiverenana indray amin'ny tazo maitso tsy misy fotony amin'ny liona mahazendana dia manampy amin'ny lamaody firavaka. Ny firavaka dia manana fahaizana miavaka hiova, manatsara ny endriny, mameno ny endriny, ny voalohany, mitondra zest amin'ny sary.
Ny mpanamboatra ny taona ho avy dia nanolotra ny solontenan'ny firaisana ara-drariny ho fanabeazana ny vatany. Ny demokrasia lamaody dia demokratika - ahafahanao manao firavaka tanteraka. Afaka manao peratra, akanjo, kavina amin'ny endriny sy ny habe rehetra ianao raha toa ka mandeha miaraka izy ireo. Ny volamena dia mbola tsy tafaverina any amin'ny toerana efa taloha, fa ny volafotsy kosa dia mbola mijanona ao amin'ny fialam-boly, ary ny endriny vita amin'ny plastika, hoditra , vato voajanahary , ary metaly sarobidy dia manan-danja.
Ny fahazoan-dalana hisafidy dia voafetra amin'ny hoe ny firavaka sy ny firavaka dia tsy tokony hanana endrika mendrika sy malefaka. Ny kalitao ihany, ny vokatra tsara dia tokony hanana vehivavy lamaody. Manolotra singa firavaka firavaka izy - elegant sy lehibe, brasele - goavana ary amin'ny endriky ny rojom-borona, pendriky, perla, diadema, ny ankamaroany dia voaravaka vato tsara tarehy.
Inona no firavaka ananana amin'izao fotoana izao?
Mba hanampiana ireo akanjo tsotra fotsiny dia zava-dehibe fotsiny ny mifankazatra amin'ny fironana ara-potoana. Ny firavaka modely dia aseho amin'ny vokatra toy izany:
Ny peratra fitondran-tena amin'ny vehivavy rehetra, manome ny toetrany. Miankina amin'ny fombanao sy ny taonanao, azonao atao ny mifidy modely izay manintona na manintona.
Ny endriky ny kavina dia hanome fahafaham-po ny sombin'ny tovovavy tanora mitaky fatratra. Mitazona rojo vy ny mpitarika, tonga eo amin'ny kavina boribory izy ireo, ary ny kavin'orona.
Izy io dia lamaody ny manao peratra marevaka eo amin'ny tanana, tsara tarehy amin'ny endriny roa, mifamatotra amin'ny rojo, ny peratra marevaka dia vava avo izay mandrakotra ny ankamaroan'ny rantsantanana.
Guru amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy sy ny zava-drehetra mifandraika aminy, no nanavao ny fanangonany:
Brand Cartier dia nirehareha tamin'ny endriky ny art deco, vita amin'ny platinà manambolamena miaraka amin'ny diamondra mavokely tsy dia fahita firy. Ireo jiro koa dia nampiasa ny perla, emerald.
Tao amin'ny karipetra mena, tsy azo natao ny tsy nitandrina ny zava-madinika mahafinaritra nataon'i David Webb. Ny iray amin'ireo tombontsoa ao amin'ny sehatry ny fasion dia mampifantoka ny saina amin'ny mpankafy amin'ireo vokatra goavam-be miaraka amin'ny vato maitso sy maitso.
Vola marevaka marevaka, mavitrika ho an'ireo zazavavy ao amin'ny fanangonan-tsarin'i Coco Rosa.
Trano fananganana lamaody no nampiseho tsikirity kanto tsara tarehy natokana ho an'ny fahavaratra, ririnina, ivelan'ny vanim-potoana. Ao amin'izy ireo dia misy floral, geométrique, loko mampiavaka, ethnic motifs, metaly mifangaro amin'ny emails, manasitrana ny kristaly. Samy hafa tanteraka ny azy ireo, saingy tafaray amin'ny fomba fiasa noforonina izy ireo, tsy dia mampihetsi-po ny fahaiza-manaony, ny fiheveran-tena amin'ny tontolon'ny asa, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny fiasana.
Mahaliana amin'ny lamaody firavaka
Ny teny hoe "manintona" dia adika amin'ny fomba samihafa. Niparitaka ny hevitr'ireo mpangalatra, ary dia nitazona ny tovovavy tanora izany - izy ireo, rehefa avy nianatra momba ny firoboroboan'ny firavaka, dia afaka misafidy zavatra iray izay manasongadina ny fomba fitenin'ny tsirairay amin'ireo firaisana ara-nofo.
Ny bitsin'ny lamaody firavaka dia:
Tsy mitovy amin'ny endrika, ny halavany, ary indraindray ny endriky ny sofina - ny fanandramana dia mampiahiahy, fa efa lasa lamaody;
fananganana tokana, ny fepetra fototra tokony hananana, manintona;
ny vokatra amin'ny vatolampy - mavitrika, miondrika;
fomba mahazatra retro.
Trends vaovao amin'ny lamaody firavaka
Ireo mpanamboatra, mitady mandrakariva vahaolana vaovao, dia nanolotra vokatra vaovao. Ny herinandro firafitry ny firavaka dia tsy hoe tsy misy fihetsiketsehana - avant-garde, futurism, retro eo an-tànan'ireo tompon-trano dia mahazo endrika mahatalanjona sy tsy ampoizina. Ny endrika 3D sy ny lamaody varim-pirazanana dia tsy nifampitantana. Saingy tokony ho nitranga izany fotoana izany. Ny Brand New & W dia naneho ny fomba nanamboaran'ny hoditra ny endri-tsarimihetsika telo dimampolo. Manomana ny asa tsara indrindra ho an'ny Estet Fashion Week ny tanora tanora malaza sy malaza isan-taona. Tamin'ny taona lasa, ny lohatenin'ny fanangonana firavaka tsara indrindra dia nomena ny marika Escada.
Fashion trends amin'ny Fashion
Bijouterie sy firavaka, toy ny lamaody iray manontolo, manalasala ny natiora, ny natiora. Tara-pahazavana, vato mangarahara, loko tsy misy zavakanto. Ao amin'ny vidin'ny vehivavy sy ny fitiavan-tanindrazana, ny endriny, indraindray miresaka momba ny fanehoana hevitra. Ho lasa mpiara-monina tsotra sy tsotra, fahamendrehana ary minimalisma. Ao amin'ny tontolon'ny firahoana dia misy fomba madio sy eklektisma . Anatin'ireo vahaolana maro sy vahaolana tsotra, ny lamaody lamaody amin'ny firavaka dia manasongadina ny ravina. Ity singa ity, izay tsy miseho lava amin'ny akanjon'ny vehivavy, dia tsy mitondra fotsiny eo amin'ny tratra sy eo akaikin'ny tendany. Feno akanjo, hatsaratsaraka, hoditra, akanjo vita amin'ny hoditra. Ny ornamana dia hosodoko amin'ny zavatra tsy ao anaty dika mitovy, dia notarafin'ny vehivavy lamaody amin'ny ampahany maromaro, miaraka amin'ny bokotra lehibe, earrings, ando.
Ahoana no hamehezana sola amin'ny akanjo?
10 amin'ireo vehivavy tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
Mahay lamaody ve ny fitafiana amin'ny ririnina?
Salady salady miaraka amin'ny doka
Monster High namoaka ny saribakolahy Lady Gaga
Latsaky ny lanjany mandritra ny fitondrana vohoka
Vazaha amin'ny tavoahanginao amin'ny tananao
Trends amin'ny lohataonan'ny 2017 - ny lamaody farany indrindra amin'ny fotoana
Women's Jackets Spring 2014
Ny voankazo mangosteen
Ny tsy fahombiazana hormona aorian'ny fanabeazana
Bebe babena ho faty
Hipopotan'ny hemôpia - vaksinina